जो फोहोरको डंगुरमा भेटिएका थिए – PathivaraOnline
Home > समाचार > जो फोहोरको डंगुरमा भेटिएका थिए
संस्थाले मानसिक अवस्था ठीक नभएका १२ जना पुरुषलाई पनि सहारा दिएको छ। उनीहरू बडिखेलमा बस्छन्। मानसिक अवस्था ठीक नभएकाले प्रत्येक दिन केही न केही समस्या दिन्छन्।अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा खबर छ । महिला र पुरुष एकै ठाउँमा राख्न सक्ने अवस्था नभएपछि १२ जना पुरुषलाई बडीखेलको एक होस्टलमा राखिएको छ। उनीहरूको रेखदेख र खानपिन गराउने जिम्मा संस्थाले लिएको छ।
कृशलाको श व यस्तो अवस्थामा भेटियो ! एक सातादेखि हराएकी किशोरीबारे परिवारले किन खबर गरेनन् प्रहरीलाई ?
मध्यरातमा एक्लै महिला भएको घरमा झ्यालबाट छिरेका यी युवाले यस्तो गरेपछि!